လက်တလော လူကြိုက်များနေတဲ့ အသစ်​ထွက်​ရှိလာတဲ့ ဟိန်းမင်းသူနဲ့ အ​မေရိကန်​အဆို​တော်​ Wendell Ray တို့ရဲ့ သီချင်းဗီဒီယို​...! - Thadin
HomeCELEBRITYလက်တလော လူကြိုက်များနေတဲ့ အသစ်​ထွက်​ရှိလာတဲ့ ဟိန်းမင်းသူနဲ့ အ​မေရိကန်​အဆို​တော်​ Wendell Ray တို့ရဲ့ သီချင်းဗီဒီယို​…!
February 11, 2019 Kay Kay CELEBRITY Comments Off on လက်တလော လူကြိုက်များနေတဲ့ အသစ်​ထွက်​ရှိလာတဲ့ ဟိန်းမင်းသူနဲ့ အ​မေရိကန်​အဆို​တော်​ Wendell Ray တို့ရဲ့ သီချင်းဗီဒီယို​…!
မြန်​မာနိုင်​ငံရဲ့ ဂျက်​စတင်​ဘီဘာ လို့​တောင်​ ပရိသတ်​​တွေက ချစ်​စနိုး​ ခေါ်​ဝေါ်ကြတဲ့ ဟိန်းမင်းသူ က​တော့ အ​နောက်​တိုင်း ဆန်​တဲ့ ရုပ်​ရည်​မျိုး ရှိသူ တစ်​ဦးပါ။
လတ်​တ​လော မှာ​တော့ ဟိန်းမင်းသူက မြန်​မာနိုင်​ငံမှာ အနုပညာ အလုပ်​​တွေ လုပ်​​နေတဲ့ အ​မေရိကန်​ အဆို​တော်​ Wendell Ray နဲ့ အတူ လက်​တွဲပြီး ဖန်​တီး ထားတဲ့ “BE WITH YOU” ဆိုတဲ့ သီချင်း​လေးကို ပရိသတ်​​တွေ အတွက်​ ​ဝေမျှ​ပေး ထားတာ ​တွေ့ရ ပါတယ်​။ အမြင်​ ဆန်းတဲ့ ဖန်​တီးမှု​ တွေနဲ့ မြူးကြွတဲ့ သီချင်း​လေးမို့ ပရိသတ်​​တွေကို ​ပျော်​ရွှင်​​ စေမှာ အမှန် ​ပါပဲ ။
​ပရိသတ်​​တွေ​အတွက်​ ဟိန်းမင်းသူနဲ့ အ​မေရိကန် ​အဆို​တော်​ Wendell Ray တို့ရဲ့ “BE WITH YOU ” ဆိုတဲ့ သီချင်း ဗီဒီယို အသစ်​​လေး ကို ​ဝေမျှ​ ပေးလိုက် ​ပါတယ်​​ နော် ​။
အ​မေရိကန် ​အဆို​တော်​ Wendell Ray က​တော့ “ BE WITH YOU ” – Hein Min Thu and Wendell Ray w / Hein Min Thu Music Video , Wendell Ray , Lancifer ” ဆိုပြီး သူတို့ရဲ့ သီချင်း​လေးကို လူမှုကွန်​ယက်​မှာ တင်​ထားခဲ့ တာပါ။
ဟိန်းမင်းသူနဲ့ အ​မေရိကန်​အဆို​တော်​ Wendell Ray တို့ရဲ့ “ BE WITH YOU ” ဆိုတဲ့ သီချင်းဗီဒီယိုအသစ်
အဆို​တော်​ Wendell Ray က​တော့ မြန်​မာနိုင်​ငံကို ချစ်​မြတ်​နိုးသူ တစ်​ဦးဖြစ်​ပြီး မြန်​မာနိုင်​ငံမှာပဲ အနုပညာအလုပ်​​တွေ ​ဇောက်​ချ လုပ်​ကိုင်​​နေ တာပါ။ ဟိန်းမင်းသူနဲ့ အ​မေရိကန်​ အဆို​တော်​ Wendell Ray တို့ရဲ့ သီချင်း​လေး ဖြစ်​တဲ့ ” BE WITH YOU ” ဆိုတဲ့ သီချင်း​လေးက အရမ်းကို နား​ထောင်​လို့​ ကောင်းပါတယ်​။ ​ပရိသတ်​​တွေ​လည်း ဟိန်းမင်းသူနဲ့ အ​မေရိကန်​ အဆို​တော်​ Wendell Ray တို့ရဲ့ သီချင်းဗီဒီယို​ အသစ်​​လေးကို သ​ဘောကျရင်​ Share သွားကြဖို့ မ​မေ့ပါနဲ့​နော်​။
လကျတလော လူကွိုကျမြားနတေဲ့ အသဈထှကျရှိလာတဲ့ ဟိနျးမငျးသူနဲ့ အမရေိကနျအဆိုတျော Wendell Ray တို့ရဲ့ သီခငျြးဗီဒီယို
မွနျမာနိုငျငံရဲ့ ဂကျြစတငျဘီဘာ လို့တောငျ ပရိသတျတှကေ ခဈြစနိုး ချေါဝျေါကွတဲ့ ဟိနျးမငျးသူ ကတော့ အနောကျတိုငျး ဆနျတဲ့ ရုပျရညျမြိုး ရှိသူ တဈဦးပါ။
လတျတလော မှာတော့ ဟိနျးမငျးသူက မွနျမာနိုငျငံမှာ အနုပညာ အလုပျတှေ လုပျနတေဲ့ အမရေိကနျ အဆိုတျော Wendell Ray နဲ့ အတူ လကျတှဲပွီး ဖနျတီး ထားတဲ့ “BE WITH YOU” ဆိုတဲ့ သီခငျြးလေးကို ပရိသတျတှေ အတှကျ ဝမြှေပေး ထားတာ တှရေ့ ပါတယျ။ အမွငျ ဆနျးတဲ့ ဖနျတီးမှု တှနေဲ့ မွူးကွှတဲ့ သီခငျြးလေးမို့ ပရိသတျတှကေို ပြျောရှငျ စမှော အမှနျ ပါပဲ ။
ပရိသတျတှအေတှကျ ဟိနျးမငျးသူနဲ့ အမရေိကနျ အဆိုတျော Wendell Ray တို့ရဲ့ “BE WITH YOU ” ဆိုတဲ့ သီခငျြး ဗီဒီယို အသဈလေး ကို ဝမြှေ ပေးလိုကျ ပါတယျ နျော ။
အမရေိကနျ အဆိုတျော Wendell Ray ကတော့ “ BE WITH YOU ” – Hein Min Thu and Wendell Ray w / Hein Min Thu Music Video , Wendell Ray , Lancifer ” ဆိုပွီး သူတို့ရဲ့ သီခငျြးလေးကို လူမှုကှနျယကျမှာ တငျထားခဲ့ တာပါ။
ဟိနျးမငျးသူနဲ့ အမရေိကနျအဆိုတျော Wendell Ray တို့ရဲ့ “ BE WITH YOU ” ဆိုတဲ့ သီခငျြးဗီဒီယိုအသဈ
အဆိုတျော Wendell Ray ကတော့ မွနျမာနိုငျငံကို ခဈြမွတျနိုးသူ တဈဦးဖွဈပွီး မွနျမာနိုငျငံမှာပဲ အနုပညာအလုပျတှေ ဇောကျခြ လုပျကိုငျနေ တာပါ။ ဟိနျးမငျးသူနဲ့ အမရေိကနျ အဆိုတျော Wendell Ray တို့ရဲ့ သီခငျြးလေး ဖွဈတဲ့ ” BE WITH YOU ” ဆိုတဲ့ သီခငျြးလေးက အရမျးကို နားထောငျလို့ ကောငျးပါတယျ။ ပရိသတျတှလေညျး ဟိနျးမငျးသူနဲ့ အမရေိကနျ အဆိုတျော Wendell Ray တို့ရဲ့ သီခငျြးဗီဒီယို အသဈလေးကို သဘောကရြငျ Share သှားကွဖို့ မမပေ့ါနဲ့နျော။
အခြားလေဆိပ်များနှင့်မတူသည့် ရန်ကုန်လေဆိပ်၏ အလွန်တရာ ထူးခြားချက်များ…!
This Month : 33752
This Year : 175209
Total views : 2416668